Ny Antandroy na Tandroy na Ntandroy dia vondrom-poko ao amin' ny faritra atsimo indrindra eto Madagasikara monina eo anelanelan' ny ony Menarandra ao andrefana sy Mandrare ao atsinanana ary ny havoana Vohimainty ao avaratra. Any amin' ny Faritra Androy no misy azy. Ireto ny tanàna lehibe any: Ambovombe sy Beloha ary Tsihombe.
1 Ireo foko ao amin' ny vondrona antandroy
2.1 Ny mponina eto Madagasikara
2.1.1 Ny foko eto Madagasikara
2.1.2 Ny vahoaka hafa eto Madagasikara
Ireo foko ao amin' ny vondrona antandroyHanova
Sarin-tany maneho ny faritra misy ny foko eto Madagasikara.
Ny mponina eto MadagasikaraHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Antandroy&oldid=1000704"
Dernière modification le 26 Janoary 2021, à 12:53
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2021 amin'ny 12:53 ity pejy ity.